Al shabaab oo soo bandhigay dhibaato ay gaarsiiyeen ciidankii Ceel Saliiini oo DF ay ka aamustay – Somali Top News
Al shabaab oo soo bandhigay dhibaato ay gaarsiiyeen ciidankii Ceel Saliiini oo DF ay ka aamustay
September 23, 2019 September 23, 2019 Somali Top News	0 Comments Al shabaab oo soo bandhigay dhibaato ay gaarsiiyeen ciidankii Ceel Saliiini oo DF ay ka aamustay
Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawirada weerarkii shalay ay ku qaadeen Saldhig Ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaanka Ceel Saliini oo u dhaxeeya Marka iyo Afgooye, halkaasoo uu ka dhacay dagaal xooggan.
Weerarka ayaa ahaa mid ku bilowday gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu furtay afaafka hore ee xerada, waxaana wixii ka dambeeyay xilligaas dhacay dagaal fool ka fool ahaa oo dagaalamayaasha Al-Shabaab dhowr jiho ay kaga qaadeen xerada.
Gaadiid dagaal iyo saanad hub ah ayay ku soo bandhigeen baraha Internet-ka ee taageera, kaasoo ay kula wareegeen dagaalkii shalay.
Arrintan ayaa jawaab u aheyd war shalay ka soo baxay Saraakiisha ciidamada dowladda oo ahaa in dagaalkii shalay ay iska caabiyeen Al-Shabaab.
Hase ahaatee warar madax bannaan ayaa sheegaya in dagaalkii shalay Al-Shabaab ku qaadeen xeradaas ay ku dileen tiro ka tirsan ciidanka dowladda, kulana wareegeen gaadiid dhowr ah oo iyo saanad ciidan.
← Xisbiga UPD oo ku dhawaaqay shirweyne Qaran
Islamic State trains in Somalia’s Puntland →
Ciidamada amniga oo fashiliyay gaari laga soo buuxiyay walxaha Qarxa
July 8, 2019 Somali Top News 0
Axmad Madoobe muxuu ka waday Madaxweyne Kheyre?
March 12, 2019 Somali Top News 0
Maamulka Gobalka Banaadir oo amar ku soo rogay dadka ka dhoofaya Garoonka Aadan Cadde
July 4, 2019 Somali Top News 0